Myanmar Security Forum - MSF - LFI/RFI
ပြိုင်မြင်းကောင်းတို့မည်သည် မိမိနှင့်အတူပြေးနေကြသည့် အခြားပြိုင်မြင်းများကို ဘယ်တော့မှ လှည့်မကြည့်။ မိမိဘာသာ အမြန်ဆုံး ပြေးနိုင်ရေးကိုသာ အာရုံစူးစိုက်စမြဲဖြစ်သည်။ Network/System Pentesting & Python3Training သင်တန်းကို Creatigon မှ4May 2019 တွင် သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို Creatigon Page တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ https://www.facebook.com/creatigon
Myanmar Security Forum - MSF Hacking Web-App Security Tutorials LFI/RFI
Powered By MyBB, © 2002-2019 MyBB Group. — Theme by FlatInk LLC.
Contact Us — Return to Top — Lite (Archive) Mode — RSS Syndication | Awards
Myanmar Security Forum (MSF) © 2013 - 2018 - All Rights Reserved.